Man United oo dhageysaneysa dalabaadka u imaanaya labo ka mid ah xiddigaheeda fashilka ku dhammeystay fasalkii dhammaaday – Gool FM
(Manchester) 26 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa haatan ku jirta dib u habeyn ay ku sameyneyso safkeeda, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay dhageysaneyso dalabaadka u imaanaya xiddigaha kala ah Donny van de Beek iyo Anthony Martial.
Man United ayaa diyaar u ah inay iska iibiso labadan xiddiga suuqa xagaagan haddii ay ku hesho qiimo macquul ah maadaama ay dooneyso inay qasnaddeeda kusoo laabato lacag ay uga soo tukaameysan karto suuqa xagaagan.
Van de Beek ayaa xagaagii hore kasoo dhaqaaqay naadiga Ajax balse waxa uu ku guuldarreystay inuu qayb ka noqdo qorshaha Macallin Ole Gunnar Solskjaer sidaas darteed, haatan waxa uu baadi goobayaa koox uu ka heli karo daqiiqado ciyaareed ku filan.
Dhinaca kale, Martial ayaa qaab ciyaareed liita la yimid fasalkii dhammaaday inkastoo qaybihii dambe uu dhaawac daran soo gaaray.
Sidaas darteed, wargeyska ESPN ayaa haatan warinaya inay Red Devils iska iibineyso labadan xiddig suuqa xagaagan haddii ay hesho dalabaad qiimo badan.
Real Madrid oo go'aan ka qaadatay saxiixa Kylian Mbappe